Feo avy any Zimbaboe-2 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 20:02 GMT
Lasa sehatra ho an'ny fipoahan'ny fankahalàna vehivavy voakiana be, izay niseho tao amin'ny parlemantan'i Zimbaboe tamin'ny herinandro lasa teo, ilay adihevitra manodidina ny lalàna vaovao, dia ny Volavolandalàna mikasika ny Herisetra an-Tokatrano izany. Nisarika ny hatezeran'ny vehivavy maneran-tany i Timothy Mubhawu, mpikambana ao anatin'ny Parlemanta Zimbaboeana miteraka resabe, raha naneho ny heviny momba ilay volavolandalàna natolotra, nilaza ny tenany ho ”mpitondra tenin'Andriamanitra”,
Tsy ho mahatsiravina toy izao ity fipoahana ity raha toa ka nambaranà mpanao lalàna hafa afa-tsy i Mubhawo. Nidina an-dalambe ireo vehivavy Zimbaboeana ny andro taorian'ilay fanambaràna malaza nataon'i Mubhawo. I Mubhawo no ahiahiana voalohany indrindra amin'ilay raharaha fanafihana mahery setra an'i Trudy Stevenson, vehivavy iray fotsy hoditra parlemantera.
Manindry ny fanajàna omena ny vehivavy ao amin'ny kolontsaina nentim-paharazana Zimbaboeana i Zimpundit, mandà ny toetsaina lany andron'i Mubhawo.
Manana fandrakofana feno an'ireo fivoarana manodidina ilay volavolandalàna ny vondron'olompirenena Zimbaboeana, Kubatana, izay hitanao eto.
Tanatinà vaovao hafa, namoaka fanambarana momba ny pôlitikam-bola i Gideon Gono, Governoran'ny Banky Foibe. Maneho hevitra momba ireo fepetra anatin'ilay fanambarana vaovao ny Bearded Man,
Afaka mamaky ilay fanambarana manontolo ianao eto.